၂ဝ၁၇ MAMA ဆုပေးပွဲတွင် တစ်နှစ်တာအတွက် အကောင်းဆုံး သီချင်းဆုကို TWICE အဖွဲ့ရရှိ - Yangon Media Group
၂ဝ၁၇ MAMA ဆုပေးပွဲတွင် တစ်နှစ်တာအတွက် အကောင်းဆုံး သီချင်းဆုကို TWICE အဖွဲ့ရရှိ
တောင်ကိုရီးယား အမျိုးသမီးအဆိုတော်အဖွဲ့ဖြစ်သည့် TWICE သည် Mnet Asian Music Awards ဆုပေးပွဲတွင် တစ်နှစ်တာအတွင်း အကောင်းဆုံးတေးသီချင်းဆုကို “Signal” သီချင်းဖြင့် ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၃ဝ တွင် Mnet ရုပ်သံလိုင်းက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။ Mnet ရုပ်သံလိုင်းက ပြသခဲ့သည့် K-Pop ဆုပေးပွဲ ဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ ယိုကိုဟားမား အမိုးဖွင့်ကွင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော MAMA ဆုပေးပွဲ၌ အမြင့်ဆုံးဆုရှင်များ ဖြစ်လာခဲ့ကြခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
JYP အင်တာတိန်းမန့်၏ ထုတ်လုပ်သူ ပတ်ဂျင်ယောင်းက ဖန်တီးထားသည့် “Signal” သီချင်းသည် ဟစ်ဟော့ပ်စတိုင် အီလက်ထရွန်နစ် အကသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့သည့်မေလတွင် ဖြန့်ချိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသီချင်းသည် တောင်ကိုရီးယား ဂီတဇယားများတွင် လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့၏ နံပါတ်(၁)နေရာကို ငါးကြိမ်မြောက် ဆက်တိုက်ရရှိမှု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ TWICE အဖွဲ့သည် ယင်းဆုအပြင် အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့လိုက် အကဖျော်ဖြေမှုဆုကိုလည်း ရရှိခဲ့ပြီး Seventeen အဖွဲ့က အကောင်းဆုံးအမျိုးသားအဖွဲ့ လိုက် အကဖျော်ဖြေမှုဆုကိုရရှိခဲ့သည်။
အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဂျီဟိုက ”ကျွန်မတို့ ရှေ့ဆက်စရာ လမ်းများစွာကျန်နေသေးပြီး တော့ လုပ်စရာအလုပ်တွေလည်း အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ ဒီလို မျိုး အချစ်တွေအများကြီးကိုရရှိပြီး ဒီလိုမျိုး အံ့သြသင့်စရာဆုကို ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”ဟု အဖွဲ့၏ ပရိသတ်များကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့သည်။ အမျိုးသားအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သော Wanna One နှင့် တက်သစ်စအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည့် PRISTIN တို့က အမျိုးသားတက်သစ်စဆုနှင့် အမျိုးသမီးတက်သစ်စဆုတို့ကို အသီးသီးရရှိခဲ့သည်။
ရိုးသားမှု သစ္စာရှိမှုတွေ ရှိလာတဲ့ တစ်နေ့ကတော့ သမီးအတွက် ပျော်စရာကောင်းတဲ့ နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လာမ??
ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျပြီး သွားလာရေး ခက်ခဲသည့် ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန် တံတ
ထိုင်းစိုက်ပျိုးရာသီ အတွင်း လယ်သမားများသို့ ဘတ် ၃၄ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ကူညီထောက်ပံ့မှုပေးမည်
ပုဂံကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဝင်ရန် ကြိုးပမ်းမှု’နှလုံးသားထဲက ပုဂံ’ဓာတ်ပုံပြပွဲကို ယခုလအတွင်း ကမ္ဘောဇသ
မောင်ဝင်းမြတ်နှင့် တေးသံရှင် ဆန်းသစ်လတို့၏ မင်္ဂလာဦး ဆွမ်းကျွေးပြုလုပ်
”မင်းသား၊ မင်းသမီးကြီးတွေ ပါတော့မှ အနုပညာ မဟုတ်ပါဘူး” ဒါရိုက်တာ ဂျိုး
တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှုများကို နှိမ်နင်းဆောင်ရွက်နေရာတွင် တိုးတက်မှု မရှိသည့် နယ်စပ်ဒေသများကိ?
(၁၃)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၅ဝဝ တန်အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဖွင့်ပွဲ၏ ကျပ်သိန်းတစ်ရာနှင့် အထက် ထီဆုငွေမျာ??
Share 35 Tweet 0
အာဆီယံဖူဆယ်ချန်ပီယံရှစ်၂ဝ၁၇ပြိုင်ပွဲတွင် အိမ်ရှင်ဗီယက်နမ်အသင်းကိုအနိုင်ရရှိကာ မြန်မာဖူ
စတုတ္ထသက်တမ်းအတွက် လက်ရှိဂျာမနီဝန်ကြီး အန်ဂျလာမာကယ် အနိုင်ရသော်လည်း ညွှန့်ပေါင်း အစိုးရဖွဲ?